Yintoni enokuyenza xa kufuneka ulungise okanye ubuyekeze ukubuyiswa okufakiwe
Ukubuyiswa kweentlawulo zeerhafu zentlawulo ye-Canada yinkqubo eqhelekileyo engenziwa kwi-Intanethi. Kodwa iimpazamo zenzeke, kwaye ngamanye amaxesha ukubuyiswa kweerhafu kufuneka kuguqulwe emva kokufakwa.
Ukuba unezilungiso okanye utshintsho kwingeniso yakho yerhafu yengeniso, akukho nto ongayenza uze ufumane iSaziso sakho soVavanyo kwi-Arhente yeRevenue Agency.
Xa usufikile ukubuyiswa kweerhafu yakho yaseKhanada, ukuba uyabona ukuba wenze iphutha, kuya kufuneka ulinde uze ufumane iSaziso sakho soVavanyo ukuyifakela.
Unokucela ukuba utshintsho lwentlawulo yerhafu ye-10 yangaphambili. Utshintsho lwentlawulo yerhafu yentsholongwane yakutshanje ingenziwa kwikhompyutha; abanye kufuneka kwenziwe ngeposi. Ngokuqhelekileyo kuthatha malunga neveki ezimbini kwi- Arhente yeRevenue Revenue Agency (CRA) ukulungiselela izicelo ezenziwe kwikhompyutha. Kuthatha malunga neeveki ezisibhozo ukuba i-CRA yenza utshintsho kwaye ithumele iSaziso sokuHlola kwakhona. Ukuqwalasela kuthatha ixesha elide kuxhomekeke kwimeko kunye nexesha lesicelo.
Ukwenza utshintsho kwiRhafu Yentlawulo Yakho Yabuyela kwi-Intanethi
Ukwenza utshintsho kwirejista yakho yerhafu yokugqibela yeRhafu yaseKhanada, okanye ukubuyiswa kweerhafu zaseKhanada kwiminyaka emibili edlulileyo, ungasebenzisa isevisi yerhafu ye- Akhawunti yam . Emva kokuba ungena ngemvume, khetha "Shintsha ukubuyela kwam."
Ungatshintsha kwakhona idilesi yakho usebenzisa isevisi yam yentela yeAkhawunti.
Ukwenza utshintsho kwiRhafu Yentlawulo Yakho Imbuyiselo ngeposi
Ukwenza utshintsho kwirejista yentlawulo yaseKhanada ngenzuzo ngeposi, okanye ubhale ileta kunye neenkcukacha zesicelo sakho okanye ugcwalise ifom ye-T1-ADJ T1 yokulungiswa kwefomu (PDF).
Unokucela ukuba utshintsho lweminyaka yerhafu oluphela kuyo nayiphi na iminyaka eyi-10 edlulileyo.
Inombolo yomshuwarensi yakho yentlalo
Inombolo yefowuni apho unokufikelela khona emini
Amaxwebhu ancedisayo malunga noshintsho olucelayo
Amaphepha axhasayo kwibango lakho lokuqala, ukuba awuwuthumeli ngaphambili.
Thumela iinguqu kwiziko lakho lerhafu.
Iingoma eziphezulu zamaKristu zika-2008